Diingadee Itoophiyaa: Jijjiiramuu noottii birrii Itoophiyaa irratti wantoota beekuu qabdan – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDiingadee Itoophiyaa: Jijjiiramuu noottii birrii Itoophiyaa irratti wantoota beekuu qabdan
Diingadee Itoophiyaa: Jijjiiramuu noottii birrii Itoophiyaa irratti wantoota beekuu qabdan
“Cabiinsi diinagdee” biyyattii mudate jijjiiramuu maallaqa Itoophiyaaf sababa akka ta’e mummeen ministiraa Abiy Ahimad himaniiru.
Itoophiyaan maallaqa waggoota 23 darbaniif itti fayyadamaa turte jijjiirushee har’a beeksiftee jirti.
Mummeen Ministiraa Abiy Ahimad hojiin jijjiirraa maallaqaa icciitiidhaan hojjetamaa kan ture ta’uu himan.
Kana malees maxxansa maallaqa haaraa kanaaf dhaabbilee biyya alaaf qofa birriin biiliyoona 3.7 kaffalamuusaa MM Abiy dubbataniiru.
Maallaqa jijjiiruun maaliif barbaachise?
MM Abiy Ahimad sababni ijoon jijjiiramuu maallaqaa “cabiinsa diinagdee” biyyattii mudate ta’uu himan.
Kaayyoon jijjiiramuu maallaqaa kun maallaqa hatame fashaleessuu akka ta’es MM Abiy dubbataniiru.
Bulchaan Baankii Biyyaalessaa Itoophiyaa Dr Yinnaagar Dassee “maallaqni guddaan baankiin alatti socho’aa jira. Kun immoo hojiileen seeraan alaa kanneen akka malaammaltummaa fi kontirobaandii akka babal’atu gargaarera,” jedhan.
Kana malees biyyattii keessatti maallaqni baankiiwwanin alatti baay’innaan faca’ee kan jiru ta’uusaatin, jijjiiraan maallaqaa amma taasifame baankootni hanqinni maallaqa dheedhii akka isaan hin mudanne kan taasisu akka ta’es himameera.
Gama biraatin babal’achuun maallaqa sobaa, maxxanfamuu maallaqa haaraaf sababa akka ta’e kan himan Dr Yinnaagar Dassee, maallaqni haaraan maxxanfame kan amma faayidaarra jiru caalaa fakkeeffamee hojjetamuuf ulfaataa akka ta’e himaniiru.
Dabalataan tarkaanfiin biyyattiin fudhatte kun itti fayyadama maallaqa dheedhii hir’isuun, hawaasni mala daddabarsa maallaqaa dijitaalaa akka fayyadamuuf haala mijataa kan uumu akka ta’es himameera.
Gosoota maallaqaa isaan kamtu jijjiirame?
Maallaqa haaraa har’a ifoomfame irratti, haalluu fi suuraan maallaqoota abbaa birrii 10, 50 fi 100 amma faayidaarra jiran irra jiran geeddaramaniiru.
Kana malees birriin abbaa 200 haaraa maxxanfameera.
Gama suuraatin qarshiin abbaa birrii 200 fulduraan suuraa kaartaa Itoophiyaa fi makoodii adii of irraa qaba. Duubaan immoo suuraa Waaliyaa qaba.
Qarshiin abbaa 200 kun fakkeeffamee akka hin hojjetamneef mallattooleen ammayyaa jedhaman irra kaayamaniiru.
Kunneen keessaa inni tokko mallattoo yeroo qarshicha sochoosanii ilaalan walin socho’u fi ‘spark’ jedhamu dha.
Tajaajilarra ooluun qarshii abbaa 200 kun baasii maxxansa maallaqaaf bahu kan hir’isu akka ta’es himameera.
Gama biraatin qarshiin abbaa birrii 100 fulduraan suuraa kaartaa Itoophiyaa, gamoo Faasiladas fi Aksuum qaba.
Duubaan immoo suuraa Holqa Soofumar fi dallaa Harartu irratti argama.
Qarshii abbaa 50 irratti suuraan qonnaan bulaa qotaa jirru akkasumas qarshii abbaa 10 irratti kan argaman manni citaa fi dubartiin hodhaa hodhitu maalaqa isa haaraa irra hin jiran.
Kana booda maaltu ta’a?
Bulchaan Baankii Biyyaalessaa Itoophiyaa Dr. Yinnaagar Dassee, maallaqni haaraan maallaqa yeroo ammaa sochiirra jiru fi eegumsaaf taa’e bakka bu’u maxxanfamee qophaa’uusaa himaniiru.
Harka caalmaan maallaqa maxxanfames gara biyyaa seenuu isaa dubbatan.
Mummeen ministiraa Abiy Ahimad hojiin jijjiirraa maallaqaa ji’oota sadi keessatti akka xummuramu himan.
Namootni maallaqa birrii 100,000 ol qaban, yeroo ji’a tokkoo keessatti gara maallaqa haaraatti akka jijjiiran akka taasifamus himameera.
Gama biraatin namni kamiyyuu maallaqa hanga birrii 10,000 manneen baankiitti battalumatti geeddarachuu danda’a. Yoo birrii 10,000 ol ta’e immoo herreega baankii qabu yookin haaraa banachuun akka kaawwatu taasifama.
MM Abiy Ahimad baankiiwwan hojii seeraan alaa kamirraayyuu akka of qusatan akeekkachiisaniiru.
Kana malees daangaa biyyaalee maallqani Itoophiyaa hedduminaan itti argama jedhaman: Sudaan, Jibuutii fi Somaaliyaatti, eegumsi cimaan akka taasifamus himameera.
Sakkatta’insi buufata xayyaaraatti taasifamu akka cimuufi mana nama dhuunfaa dabalatee iddoowwan garaagaraatti sakkata’iinsi tasaa akka adeemsifamus MM Abiy dubbatan.
AGM:Dr.Abiy Ahmad Qabsoo Qeerroo Oromoo fi Tigraayin Laamshayee Mallaqa Jijjiruf Dirqame.